Umbala omuhle kakhulu we-KDE | Kusuka kuLinux
Umbala omuhle kakhulu we-KDE
KDE Kungokwami ​​imvelo enesiphetho / isiphetho esihle kakhulu, ngiyayithanda ngaphezu kwakho konke okunye. Yize ngihlala ngicabanga ukuthi imibala eza ngokuzenzakalela, ayimbi noma ayimnandi, kepha ibingenayo "impilo".
Ngisanda kuthola eminye imibala ebabazekayo, iyilokho ebengikufuna ... empeleni, ngiyithola iphelele * - *
Ngikushiyela ezinye izinhlelo zokusebenza, ukuze ubone ukuthi ngikhuluma ngani:
Ukuba nale mibala (empeleni zibukeka zicijile, kepha ezithombeni zesikrini zithole i-opaque hehe) zilula kakhulu.
2. Uma lokhu sekwenziwe, kufanele sivule ifayela le- Amasethingi Esistimu, bese uya ku Ukubukeka kwezicelo:
3. Uma sichofoza kabili kunketho engiyikhombisa ngenhla, kuzovuleka elinye iwindi, lapho sizokhetha khona i- «Imibala»Kumenyu engakwesokunxele.
4. Endaweni engakwesokudla, sizokhonjiswa ububanzi bemibala esinayo, ukufaka le entsha esiyilayishayo, chofoza inketho «Iskimu sokungenisa ...«
Ngikushiyela isithombe salezi zinyathelo ezimbili zokugcina, ukuze uqonde kangcono:
5. Uma sesiqhafaza ku Ngenisa i-schema, kuzovuleka iwindi esizosesha ngalo kufolda yethu (ekhaya) lefayela esisanda kulilanda (10147817-ForkedIaOraSteel.imibala) bese siyichofoza kabili.
6. Kwenziwe, kuhlala kuphela ukuyikhetha (njengoba kukhethwe esithombeni esedlule) bese uchofoza Faka isicelo. Le mibala emihle izobekwa kubo 😀
Le mibala yabenza salim salim futhi ngahlangana nabo ngenxa I-KDE-Bheka. Inkulungwane simbonga ngalomsebenzi hehe, yilokho nje abekufuna 😀
Sanibonani futhi ... ngitshele, Uyayithanda le mibala noma cha? (I.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Umbala omuhle kakhulu we-KDE
Ngokunambitheka kwami ​​okugcwele kakhulu okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuhle kakhulu kuphuzi olunogwaja, hahahahaha.
Ngiyayithanda leyo eluhlaza okwesibhakabhaka 😀
ukuphuzi okuncane kancane nezinkinobho ezinemibala futhi kuzoba kuhle, ngithanda ibanga lemibala yeSmoothoctans. 8)
Angazi ukuthi kuyini, uma unomusa kakhulu ukubeka isixhumanisi 🙂
Sengikopisha isibindi, hahahaha.
Ndoda, ngiyifake ngaphezu kwanoma yini ngoba yenza okuthile ngengqikithi yeQSQ yeFirefox nayo esebenzisa lowo mbala oluhlaza okwesibhakabhaka okungumbala wami engiwuthandayo. Akukubi. Ukuphela kwento yokuthi esikhundleni sezinyathelo eziningi zokugcina ezingafakwa ngqo kusuka kuzintandokazi zohlelo engicabanga ukuthi ziyashesha.
Ah yebo hehe uqinisile 😀
Okwenzekayo ukuthi angijwayele ukusebenzisa lezi zinketho ukufaka ngqo kusuka ku-intanethi, ngakho-ke ngikhohlwa ukuthi zikhona ^ _ ^ U
Akwenzeki na xD. Njengoba ngimusha kulokhu ngicabanga ukuthi angikakujwayeli ukusetshenziswa kwekhonsoli nalabo kini abanokuningi kulokhu ngicabanga ukuthi niyakujabulela futhi ninakho. Kuyisihloko esisalindile enginaso;).
Ngisebenzisa umdlalo weCaledonia theme color !!!!
Mina, njengoMarco, ngisebenzisa uhla lwemibala yaseCaledonia, inhlanganisela yabo ibonakala ithambile kakhulu futhi akukho lutho olulayishiwe ... Olwakho luhlaza okotshani kakhulu ukunambitha kwami.
imibala kakhulu ihhovisi 2007 xDD
Ngokuqondile, okushiwo yi-KZKG ^ uGaara, ungumlandeli wemibala ye-Windows.
lokho kuchaza konke. 🙂
Siyabonga ngethiphu, nalu uhlelo umuntu aqanjwe ngalo ngenhla:
Siyabonga ngesixhumanisi 😀
Ngizamile ama-Smooth Octans (ajwayelekile ngoba kunamabanga amaningana) futhi ngicabanga ukuthi angifanela kakhulu kunangaphambilini ngoba okwakungangikholisi ngalokhu umbala ophuzi ovela kuzeluleko zamathuluzi ezincomo zohlelo (I Ngiyaxolisa xD). Manje sengizobheka iCaledonia nayo ezwakale ingijwayela ngegama.
Ngale ndlela, ngisanda kukhumbula, ngoba sikhuluma ngokwenza imvelo ibe ngeyakho, umbuzo wakudala ongaphawula kuwo kokunye okuthunyelwe, ngaphandle kukaFaenza, ngabe uyazi elinye iqembu lezithonjana ezinesitayela sokubukisa nenhle ilingana, angazi, ngamathoni aluhlaza okwesibhakabhaka nokuthi isekela bonke osayizi bezimpawu, njll.? Ngiyabonga.
Ngikweluleka ukuthi usebenzise i-Caledonian noma izithonjana ze-Allgrey
IFaenza inezinguqulo zayo ezinamathoni aluhlaza okwesibhakabhaka, okungenani amafolda. UFaenza Cupertino uyisibonelo sabo 😀
mmm nop, angazi enye enjengaleyo 🙁 ... kungukuthi ngeFaenza, awu, bengingafuni abanye haha
Okwamanje angikazami ukuzama lezi ozishoyo, ngakho-ke okwamanje ngihlala noFaenza, ngerekhodi, ngiyabathanda, kepha kubukeka sengathi wonke umuntu uyabafuna. Ekuqaleni bengingafuni ukuthinta noma yini yesici sokuqala ngoba sekulungile kepha manje phakathi kobubanzi bemibala, iphepha lodonga elincane neliluhlaza nokunye engicabanga ukuthi ngithole isitayela esihle kakhulu esiluhlaza okwesibhakabhaka.
Okungangikholisi ngama-Smooth Octans akhethiwe (imininingwane emincane) ukuthi uma uhambisa isikhombisi segundane ngaphezu kwelinye lamathuluzi wamathuluzi, awukugqamisi noma "ukuwakha" njengoba kwenza omunye, kepha woza, imininingwane emincane. Izinkinobho zibukeka zizinhle.
Ngizoncoma uhlelo lombala lwe- "Ia Ora Blue", luzame, uqinisekile ukuluthanda
Le oyishoyo ngiyizamile futhi inhle kepha ngeshwa ngizamile enye enegama, ake sithi, iyafana: iBlue Sora futhi akubukeki kubi futhi uma kwenzeka ufuna ukuyizama.
Uyazi ukuthi yikuphi okubukeka kukuhle lokhu: http://kde-look.org/content/preview.php?preview=1&id=123032&file1=123032-1.png&file2=123032-2.png&file3=123032-3.png&name=elementary
Lowo ovela ku- @ KZKG ^ UGaara ubonakala kimi ehlobe kakhulu ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa kuyaziwa ukuthi ngokuthanda umbala ...
HAHA yebo impela 😀
Ngiyayithanda kanjalo, ilayishwe nge-LOL eluhlaza okwesibhakabhaka !!!
Yize le oyibekayo ayiyimbi neze ... inempunga ethe xaxa kunalokho ebengingathanda, kodwa ayimbi bad
Siyabonga ngamazwana, sekuyinto ejwayelekile ukukufunda lapha futhi lokho kuyinto enhle 🙂
Yebo, i-Elementary edumile, ngangikukhohliwe ngaye :(.
Sesivele sifinyelele ku-200.000 ukuvakashelwa
Njengoba iLinux isivalelisa ingunaphakade